Yakachipa yeEpostar Chitikiti Mitengo uye Mitengo Yekufamba | Chengetedza Chitima
Yakachipa yeEpostar Chitikiti Mitengo uye Mitengo Yekufamba
musha > Yakachipa yeEpostar Chitikiti Mitengo uye Mitengo Yekufamba
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Tikiti dzinodhura dzeEurostar uye Mitengo yekufamba kweEquostar uye zvakanaka.
Topics: 1. Eurostar nechitima Zvakakwirira
2. Nezve Eurostar 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Aye Akachipa Eurostar Chitikiti
4. Akawanda sei matikiti eEurostar anodhura 5. Nei zviri nani kutora iyo Eurostar chitima, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Standard Premier uye Bhizinesi Prime pamusoro peEurostar 7. Kune here kunyoreswa kweEurostar
8. Nguva yakareba sei kusimuka kusati kwasvika 9. Ndeapi maEurostar zvitima zvirahwe
10. Izvo zviteshi zvinoshandiswa neEurostar 11. Eurostar FAQs
Eurostar nechitima Zvakakwirira
Iyo kambani yeEurostar yakatangwa musi wa14 Mbudzi 1994
Imwe yedzitima dzinokurumidza muEurope ndiEurostar, Iko kukurumidza iyo iyo Eurostar inosvika kune mazana mazana matatu nemashanu paawa
Iyo Eurostar Channel Tunnel iri 50.45 km yakareba kana 31.5 zvemakiromita. Izvo zvakafanana 169 Eiffel Towers akasungwa pamusoro peumwe neumwe
2h15 yenguva yekufamba pakati peParis neLondon pane bhodhi iyo Eurostar
Kana uchifamba neEurostar kubva kuUK kuenda kuEurope, wawana 1 nguva yekudzoka nenguva
Kuyambuka kweChannel Mugero kunotora 35 maminitsi
EEpostar yakakwira zvekumhanya zvitima ishumiro iri kubatanidza Western Europe KuLondon neKent muUnited Kingdom, Izvo zvinobatana kubva kuEurope ndiParis uye Lille muFrance, kweBrussels, uye Antwerp muBelgium, Rotterdam uye Amsterdam muNetherlands. wo, unogona kuwana nechitima kubva kuLondon kuenda kuDisneyland Paris (Marne La Vallee Chessy Chitima Chiteshi) uye zvakare mafambiro emwaka muFrance Zvakaita saMarseilles neMoutiers muFrance Alps. Zvese zvitima zveEurostar zvinopfuura neChirungu Channel kuburikidza neChannel Tunnel.
The Eurostar chitima basa zvitima zviri kufamba kusvika 320 km kweawa pamakwara ekumhanya echitima. Sezvo Eurostar yakatanga kushanda mukati 1994, mitsara mitsva yakavakirwa muBelgium uye Iyo UK yekudzikisa nguva dzekufamba pakati peiyo Eurostar mafambiro. Iyo mbiri-nhanho Channel Tunnel Rail Link chirongwa chakapihwa musi wa 14 Mbudzi 2007, apo iyo London terminal yeEurostar yakachinjirwa kubva kuWaterloo International kuenda London St Pancras International chiteshi chechitima.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matiketi eEurostar
Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Aye Akachipa Eurostar Chitikiti
nhamba 1: Bhuka matikiti ako eEostostar pamberi apa sezvaunogona
Matikiti echitima eEostostar zvinowanikwa pakati 3 mwedzi kusvika 6 mwedzi pamberi pekubva muchitima. Kuhodha matikiti echitima pamberi peve nechokwadi chekuti iwe unowana matikiti anodhura uye matengo anodhura eEptostar zvitima zvakanyanya. Eurostar zvitima zvezvitiketi mitengo inokwira mumutengo apo iwe unosvika pedyo nezuva rekufamba, saka kuitira chengetedza mari pakutenga kwako kwetiketi, kuraira sezvingabvira mberi.
nhamba 2: Kufamba neEurostar mune nguva-yepamusoro peak
Eurostar, matikiti emitengo anodhura panguva yeku off-peak maawa, pakutanga kwevhiki, uye masikati. Pakati pevhiki vhiki dzinofamba nzendo (Chipiri, Chitatu neChina) kazhinji inopa mitengo yakachipa. Nemitengo yepamusoro, usatore iyo Eurostar mangwanani-ngwanani uye kutanga kwemanheru mukati mevhiki (nekuda kwevazhinji vafambi bhizinesi), zvakare dzivisa kutora mabhiza eEurostar musi weChishanu neSvondo manheru (zvinofarira vhiki dzevhiki kuwana), panguva zororo revanhu uye zvakare panguva dzechikoro mitengo yeEurostar skyrocket.
nhamba 3: Raira matikiti ako eEurostar paunenge uine chokwadi neyako yekufambisa chirongwa
EEostostar zvitima zvebasa zviri mukuda kwazvo uye pari zvino, chete Eurostar njanji kambani inoshandisa zvitima muChirungu Channel mugero, saka, hapana makwikwi. Eurostar kuva wega muchitima anoshanda mune nzira pakati peEngland neWestern Europe yakaisa mimwe tiketi dzezvitima. Chete Bhizinesi Pele Rudzi rwematikiti ezvitima anogona kuchinjaniswa, mamwe matikiti ezvitima haagoni kuchinjaniswa kana kudzoserwa mari, asi kune maforamu pane internet kuti iwe unogona kutengesa ako matiketi echitima ruoko rwechipiri. saka, Sevha Yekudzidziswa kwechitima ye Kufamba kweEpostar ndeyekubhuka kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eEurostar paSave A Chitima
Sevha A Chitima ine chikuru chakapihwa matiketi echitima muEurope nepasirese, uye nekuda kwesimba redu, isu tinowana yakachipa Epostar tikiti. Isu takabatana kune mazhinji mareniji evanoshanda uye zviwanikwa uye yedu tekinoroji maalgorithms anokupa iwe unodhura zvachose Euro tikiti uye dzimwe nguva nemisanganidzo yevamwe vatyairi vechitima kune dzimwe nzvimbo. Isu tinogona zvakare kutsvaga dzimwe nzira dzeEurostar.
Amsterdam KuLondon chitima matiketi
Paris kuenda kuLondon matiketi echitima
Brussels kuenda kuLondon matiketi echitima
Akawanda sei matikiti eEurostar anodhura?
Mitengo yematikiti inogona kutanga pa € ​​35 panguva yekusimudzira asi inogona kusvika € 310 paminiti yekupedzisira. Mitengo yeExpostar zvinoenderana nekirasi yaunosarudza. Pano pane pfupiso tafura yemitengo yepakati yekirasi yeLondon-Paris / London-Brussels / London-Amsterdam inofamba:
Lille kuenda kuLondon nechitima
Nei zviri nani kutora iyo Eurostar chitima, uye kwete kufamba nendege?
1) Kubudirira kweEurostar kufamba ndeyekuti iwe enda unosvika zvakananga pakati peguta mune chero maguta aunofamba uchibva, ichi chinhu chakasiyana kwazvo nezvitima, saka kana iwe uchirovedza kufamba kubva kuParis, kweBrussels, Amsterdam, reRotterdam, Antwerp, Lille kana London iyi yakanyanya kubatsirwa kweEurostar. Kana toreva Eurostar mitengo, zvinowanzosiyana. Kumwe kusimudzira kunokubvumidza iwe kuti utore Eurostar matikiti anodhura. Asi mukati memazuva ekupedzisira kusati kwaenda, mitengo iri kuwedzera kukwira. Kana iwe uchida kufamba kwakanyorovera, Eurostar ndeyako iwe!
2) Kufamba nendege kune maitiro ekuchengetedza airport, uye izvo zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve uri 2 maawa usati waronga kuenda, neEurostar iwe unofanirwa kuve wakarurama 1 awa pamberi. wo, iwe unofanirwa kuenda kuairport kubva mukati meguta. Saka kana iwe ukaverenga iyo rwendo rwese nguva, Eurostar inogara ichikunda munguva yakazara yekufamba.
3) Dzimwe nguva mitengo yezvitima yakakwira kupfuura neyekufamba nendege pamhepo yakatarisana netiketi, asi kuenzanisa kunofanira kusanganisira, marii yaunotora kuti utore chero nzira yekutakura kuenda kuairport, kunze kwekunge mune zvimwe zviitiko iwe unowana zvakare nguva yekuzorora kana achifamba neEurostar, uye kwekupedzisira neEurostar iwe hauna mari yekubhadhara.
4) Ndege ndechimwe chezvikonzero zvekusvibiswa kwepasi redu zvakanyanya, padanho rekufananidza, zvitima zvakawandisa nharaunda ine hushamwari, uye kana iwe uchifananidza ndege yekudzidzira kufamba, kufamba kwechitima ndeye 20x yakaderera kabhoni yakasviba pane kuita ndege.
Luxembourg KuLondon tikiti
Antwerp kuenda kuLondon tikiti
Rotterdam kuenda kuLondon matiketi
Lyon kuenda kuLondon tikiti
Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Standard Premier, uye Bhizinesi Mukuru kuEurostar?
Zvitima zveEurostar zvine mazana emakirasi masevhisi ekuvakirwa chero mabhajeti, uye chero rudzi rwemufambi, ungave uri mufambi webhizinesi kana nhandaro kana zvese zviri zviviri 🙂
Mukombe weEostostar Matikiti:
The Tikiti yeEastostar Standard ndiyo yakachipa pane yese fares iripo. Zvakanaka kubhuka iyi tiketi yemberi pamberi, nekuda kweMatikiti matikiti akadzika mutengo – vanotengesa nekukurumidza. Vafambi vanobata tikiti rakajairika rinogona kutora 2 masutukesi + 1 takura-nhumbi muzvinhu zvemahara. Vapfuuri pane Standard Eurostar Matikiti anokwanisawo kunakirwa emahara WiFi uye kusarudzwa kwechigaro. Matikiti akajairika kazhinji haadzoreke.
Prime Standard Eurostar Matikiti:
Iyi kirasi yematikiti inodhura kupfuura iyo yemhando yemaTiketi Euroostar tikiti, ari Tiketi yePremiyamu inopa mamwe mabasa. Pamusoro pekubatsira kwemaStandi matikiti atakanyora pamusoro, Matikiti ePrince Standard anopa zvigaro zvinoyevedza zvine imwezve gumbo, sarudzo yakasarudzika yemagazini uye mapepanhau anopiwa mahara, uye iwe unopihwa chikafu chakareruka uye zvinwiwa kuchigaro chako pane bhodhi reEurostar. Matikiti ePrince standard anokwenenzverwa nemari mubhadharo zvichienderana nekwauri kuenda.
Bhizinesi Premier Eurostar Matikiti:
The Eurostar Bhizinesi Yekutanga tikiti vatengi vanogona kunakidzwa zvese zvakanakira isu isu takanyora pamusoro asi zvakare, vafambi veEurostar Bhizinesi Yepamusoro vachabatsirwa nayo 3 mabhegi emasaini pane 2, iyo yakasarudzika inopisa menyu yakagadzirirwa neanozivikanwa chef Raymond Blanc, Vapfuuri veBusiness Premier vanogona kunakidzwa kuimba yekutandarira vasati vakwira chitima munzira kuenda kuLondon kana kubva kuLondon, nekuwedzera kutarisa-mukati mune chete 10 maminetsi uye tekisi yekuchengetedza nzvimbo ivo chete. Chikurukuru, iyi mhando yeEurostar Bhizinesi Yekutakura Chitiketi tikiti inobvumira kufamba nyore: unogona kushandura uye kukanzura rwendo rwako, usati waenda kana kusvika 60 mazuva mushure mekubva kwako, zvese pasina muripo wakawedzerwa.
Kune here kunyoreswa kweEurostar?
Aihwa, uye pane zvinopesana, Eurostar inongotsigirwa nehuku kunongedza matikiti uye haina kutsigirwa nechero rekufamba kwekufamba, asi kana iwe uchifamba zvakanyanya neEurostar unogona kujoina Eurostar Club, ichi chirongwa chekuvimbika chinokupa iwe kuti utore nzvimbo dzekufamba dzechitima kuitira kuti ugokwanisa kudzikunura aya mapipi kumatikiti kana discounts. Iwe unowana 1 nongedzera yega yega yega mari yawakashandisa uye idzi pfungwa dzinokupa iwe kune runyararo rwakafanira:
– Kubva 200 pfungwa: Iwe unowana matikiti eEostostar pamitengo yakaderedzwa.
– Kana iwe ukawana 500 pfungwa: unogona kuwana 1 kurovedza sevhisi kusimudzira.
– Uye kana iwe wakakwanisa kusvika 1,000 pfungwa: unogona kudzikunura 1,000 anonongedza rwendo rwekutenderera ne Eurostar kuenda kuLondon kubva kupi zvako kuWestern Europe.
Nguva yakareba sei kusimuka kusati kwasvika?
Kuti uwane yako Eurostar uye uve nenguva chaiyo, iyo njanji inokurudzira kuti iwe unosvika 1 awa pamberi peEurostar yako chitima ichienda. Isu paSave Chitima kubvira takafamba zvakanyanya pazvitima zveEurostar kuti iyi yakwana nguva yakakwana uye kana iwo mutsara uri pakubata kwepasipoti hauzove wakareba, unogona zvakare kunakidzwa nezvitoro uye tora izvo zvinhu zvaunoda iwe rwendo rwechitima kuti uve wakasununguka sezvinobvira.
London kuenda kuMarseilles Zvitima
London kuenda kuMoutiers Zvitima
London kuenda kuBourg Saint Maurice Zvitima
Ndeapi maEurostar zvitima zvirahwe?
Uyu mubvunzo wakaoma uye mumwe uyo Chengetedza Chitima unogona kupindura mune chaiyo-nguva, enda kune yedu yekumba peji uye unyore munzvimbo yako uye kwauri kuenda, uye iwe unogona kuwana chakanyanya Eurostar zvitima zvirahwe pane, Kune zvitima kubva 7 mangwanani kuenda 9 manheru manheru kune chero eEuropeostar nzira uye nenzira dzinowanzogara dzakadai seParis kuenda kuLondon kana London kuenda kuParis, iwe une Eurostar zvitima zvinomhanya kwega kwega kwehafu yeawa, iwe unongofanirwa kusarudza iyo yakakodzera Eurostar tikiti iyo yakagadzikana kune yako yekufamba nguva.
London kuenda kuAntwerp chitima chechitima
London kuenda kuRotterdam chitima chechitima
Disneyland Marne-la-Vallee kuenda kuLondon tiketi
London kuenda kuLille chitima chechitima
Izvo zviteshi zvinoshandiswa neEurostar?
Chiteshi chechitima cheParis cheEurostar chinonzi Paris Gare du Nord, chiteshi chechitima chiri mudunhu regumi reParis, zvinova +-30 maminetsi kufamba kubva kuNotre Dame's Cathedral. Kutora iyo Eurostar, iwe unofanirwa kupinda muchiteshi uye ukwire kumusoro 1 pasi mukati meGare du Nord uchishandisa escalators iri pakati pechiteshi.
PaDisneyland Paris, Eurostar inosvika pachiteshi Marne La Vallee Chessy, iyo iripo 5 maminetsi kufamba kubva kuDisneyland Resort uye Disneyland Hotera. Kune yekuruboshwe yekuchengetera masisitimu mukati mechiteshi uye iwe unogona kuenda kunakidzwa kwepaki pasina kunetseka nezve chako chakakosha kutakura zvinhu.
MuLondon, Mazuva ano Zvitima zveEurostar zvinobva zvasvika St Pancras International Chiteshi, iri kuchamhembe kweLondon guta. Pamberi 2007, Zvitima zveEurostar zvaimboita kusvika kuWaterloo Station muLondon.
The Brussels Midi-Zuid (Brussels Maodzanyemba) chiteshi chiri pakati peBrussels, asi ita shuwa unonzwisisa kuti unoda Brussels Midi-Zuid uye kwete Brussels Central Station, Brussels Midi-Zuid chiteshi chechitima ane 22 anodzidzisa mapuratifomu, uye hofisi yetikiti yeEurostar iri padyo nepuratifomu 8. Tikiti yeEroostar tikiti inokubvumira kuti ufambe wakasununguka pakati peBrussels Midi Zuid uye Brussels Central.
Amsterdam Central (Amsterdam Central Station) iri muAmsterdam guta pakati chaipo porwizi, paunobva pachiteshi chechitima, unoona Amsterdam Main Street izere nezvinokwezva zvakaita saMadame Tussauds uye kwete kubva ipapo zvakare Red light dunhu. Sezvakawanda muzvitima zvikuru zvechitima muEurope, une machira depots anovhura mangwanani uye anovhara kunonoka kana iwe uchingoda kushanyira 1 zuva kana usati waona kuti utarise muhotera yako.
MuLille, une 2 zviteshi zvechitima zvisiri kure nemumwe, asi unofanira kurangarira izvo Eurostar terminal muLille, ndizvo Lille Europe uye kwete Lille Flandres, asi kunyangwe iwe ukaita izvi zvive nyore kuita chikanganiso, zviteshi zvechitima ndizvo 5 maminetsi kupatsanurana.
Antwerp Central Station ndipo paunokwira Eurostar muAntwerp iro guta rechipiri pakukura muBelgium, Kana iwe uchifamba kubva Antwerp, tinokurudzira kuti unouya pachiteshi chechitima zvakareba kupfuura zvakakurudzirwa 1 awa isati yaenda nekuti izvi chiteshi chechitima chakunda mibairo yekushongedza uye zvivakwa uye zvine 5 pasi uye nezvakanaka kwazvo kufamba mairi.
Kana uchifamba uchibva kuRotterdam, unenge uchishandisa Rotterdam Central Station kana muzita rayo reRussia Rotterdam Central, chiteshi ichi chechitima chakavakwa senge diki yekutengesa mall kubva mukati kunze, saka iwe unonakidzwa nekutenga kwakanaka zvisati zvaitika uye shure kwako Rwendo rweEcyostar.
Chii chandinofanira kuunza neni paEurostar?
Kuunza iwe pachako kune yako Eurostar rwendo kwakakosha, asi pamusoro pacho iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti une gwaro rekufambisa kwako reEurostar newe, imwe inofanirwa-ine pasipoti inoshanda uye inogara yakadaro zvakanaka kuva neinishuwarenzi yekufamba.
Ndeipi kambani ine varidzi veEurostar?
Iyo kambani ine muridzi weEurostar, inonzi haishamisi Eurostar International Limited, 55% yavo SNCF, 30% CDPQ Canada, 10% Federated Hermes uye yakasara ndeyaBelgian njanji, SNCB.
Eurostar FAQ pane Ndekupi kwandingaende neEurostar?
Kunze kweParis, London, Amsterdam uye kweBrussels, reRotterdam, uye Lille, Eurostar inoshandawo yemwaka mitsara. Munguva yezhizha, pakati paJuly naSeptember, mamwe maEroostar zvitima anoenda zvakananga kuAvignon neMarseilles, panguva yemwedzi yechando, pakati paZvita naApril, Zvitima zveEurostar zvinogona kuenda zvakananga kumatunhu easki muAlps akadai seMoutiers kana Bourg St Maurice ayo ari madhorobha akakosha kubva kuSki Resorts seLa Plange., Kusarudza izvo, Tignes uye Val Thorens.
Ndeapi ma boarding maitiro eEurostar?
Paunosvika kune chiteshi chechitima uye nzvimbo yakasarudzwa, unotarisa tikiti yako yeEurostar, Mazuva ano vanhu vanofarira kushandisa kodhi yeQR, asi iwe unogona zvakare nekopi yakaoma yechitima chako chechitima newe uye tarisa icho, ipapo iwe unofanirwa kuenda kuburikidza neyekuchengetedza chengetedzo (ayo anomhanya kwazvo kupfuura munhandare dzemhepo), enda kune passport control uye uyambuke muganho uye ipapo unofamba kuenda kune chitima chako uye nenzira ine akati wandei zvitoro kana iyo Eurostar lounge, mune iyi vhidhiyo inotevera iwe unoona maitiro ese kubva paunosvika kune chiteshi chechitima kusvikira iwe ukwira yako yeEurostar chitima.
Ndeapi masevhisi paEurostar?
Kune nzvimbo pane yeEurostar chitima chakatsaurirwa kune zvinwiwa uye chikafu chisina kujeka pazvitima zveEurostar, Menyu inosanganisira masangweji, chocolate machipisi, nezvikafu zvishoma, chokoreti mabara, kofi, chokoreti inopisa kana tii. Iwe unogona saka kudya uye kunwa muresitoreti ino njanji mota kana kutora zvawakatenga zvadzokera pachigaro chako. Unogona kushandisa slots emagetsi padyo nechigaro chako pazvitima zveEurostar.
Ndinosvika sei kuLondon St. Pancras International kutora iyo Eurostar chitima?
Sezvinei nezvose zvinodiwa zvekufambisa muLondon, kushandisa London pasi pevhu kusvika kuSt Pancras International Station ndiyo nzira iri nyore. Matanhatu akasiyana epasi pevhu tambo anosvika paCross Cross Station uye kubva ipapo unogona kufamba netsoka kuenda kuSt Pancras International mumaminetsi mashoma. London St Pancras International iri zvakare maminetsi mashoma kubva kuEuston chitima chechitima kana uchiuya uchibva kuSouth London.
Zvinogoneka here kutora eErostar zvitima pakati peLondon neAmsterdam?
Kubva muna Kubvumbi 2018, ndatenda kuEurostar, unogona kufamba pakati peLondon neAmsterdam munenge 3-4 maawa, uye hapana chikonzero chekuchinja zvitima muBrussels kunyangwe zvimwe zveEurostar zvitima kubva kuLondon kuenda kuAmsterdam, inomira muBrussels, asi izvo zvinoenderana nemitikiti yeEurostar iwe yaunotenga.
Yakanyanya Inodikanwa Eurostar FAQ – Ini ndinofanira here kubhuka chigaro pamberi peEurostar?
Paunotenga tikiti yeEurostar chitima, chigaro chinogoverwa iwe pachako kana iwe uchiita yako yekugadza. Uye kana paine zvigaro zvepachena kana iwe uri muchitima, unobvumidzwa kutenderedza kuti uwane imwe nzvimbo.
Iko kune WiFi internet mukati meEurostar?
Unogona kunakidzwa Yemahara WiFi internet pamaseti ese eEostostar uye ese makirasi ekufamba kana iwe uchitenga Eurostar matikiti pamberi.
Kana iwe wasvikira kure izvi, iwe unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve ako eEurostar zvitima uye akagadzirira kutenga yako Eurostar chitima chitima pa SaveATrain.com
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura iyo / pl kuenda / nl kana / fr uye mitauro yakawanda.